3D pakudhinda simbi Nezvakakuyiwa, Titanium upfu, nickel upfu, Idenderedzwa simbi Nezvakakuyiwa-Vday chirungiso Manufacturing Technology Co., Ltd.
Vday chirungiso Manufacturing Technology Co., Ltd.
VTECH ari mugadziri mu China, iro specialized mukubudisa Nano uye micro simbi Nezvakakuyiwa nokuda 3D Printing. With kwayo hwokugadzira kuwanda uye kuramba utsanzi mu upfu simbi mumunda, hazvina yakabereka yose akatevedzana yemhando simbi Nezvakakuyiwa nokuda chirungiso kugadzira (3D kudhindwa), kusanganisira Ti anotsanangura chiwanikwa Nezvakakuyiwa, MG anotsanangura chiwanikwa Nezvakakuyiwa, Al-inobva chiwanikwa Nezvakakuyiwa, Ni anotsanangura chiwanikwa Nezvakakuyiwa, Stainless simbi Nezvakakuyiwa, chishandiso simbi Nezvakakuyiwa uye amorphous chiwanikwa Nezvakakuyiwa.
Nezvakakuyiwa pamusoro VTECH vari kumusoro kwomwoyo, zvakanaka sphericity, wakatsetseka pamusoro. PARTICIPLE hukuru vari yunifomu ultrafine. The Nezvakakuyiwa vari zvinowanzoshandiswa Aerospace, zvokurapa,lightweight pakugadzira,remanufacturing yenhengo, customized mabasa digitization, Kugadzirwa kunzwisisa zvikamu.
Kupinza zvakanakira zivo kumusika, kuramba hwokugadzira utsanzi uye akapedza vatengi maitiro, VTECH vanogona kukurumidza kuita uye mabasa rwenyanzvi vatengi zvose.
VTECH panhau ose mutengi sezvo zvinokosha-refu naye. Nguva dzose vachichingura kuonana kuti pamwe namazano-inobatsira.
Ti-kwakavakirwa chiwanikwa Nezvakakuyiwa
Ti-6Al-4V Grade 5 upfu
Ti-6Al-4V Grade 23 upfu
Ni anotsanangura chiwanikwa Nezvakakuyiwa
Inconel 718 upfu
Inconel 625 upfu
Fe anotsanangura chiwanikwa Nezvakakuyiwa
Hot Isostatic Kupfuurira
Metal jekiseni Kuumbwa
bemhapemha & Spraying